Embassy Archives - Page 2 of 3 - South Africa Information📢 : South Africa Information📢
Official Embassy of Swaziland in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about Embassy of Swaziland in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The Swaziland embassy is one of 260 foreign representations in South Africa, and one of 135 foreign representations in Pretoria. This nation also attribute their mission […]
Official Embassy of Sweden in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about Embassy of Sweden in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled from […]
Embassy of Switzerland in Pretoria, South Africa 2020-2021
Official Embassy of Switzerland in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about the Embassy of Switzerland in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled […]
Embassy of Syria in Pretoria South Africa
Official Embassy of United Arab Emirates in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about Embassy of Syria in Pretoria South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. […]
Embassy of Taiwan in South Africa
Official Embassy of Taiwan in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about the Embassy of Taiwan in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled […]
Embassy of Tanzania in Pretoria, South Africa 2020-2021
Official Embassy of Tanzania in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about Embassy of Tanzania in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled from […]
Embassy of Thailand in South Africa 2020-2021
Official Embassy of Thailand in Pretoria South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about the Embassy of Thailand in South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled from […]
Embassy of Tunisia in South Africa-Full details and Contacts
Official Embassy of Tunisia in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about the Embassy of Tunisia in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled […]
Ugandan High Commission in Pretoria, South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about Ugandan High Commission in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The Ugandan embassy is one of 260 foreign representations in South Africa, and one of 135 foreign representations in Pretoria. This nation also attribute their mission at […]
Official Embassy of Vietnam in Pretoria South Africa 2020-2021 We(zainfo.co.za Team) are pleased to inform you about Embassy of Vietnam in Pretoria, South Africa 2020-2021: see full details below The mission of any Country Embassy is to advance the interests of their States and to serve and protect its citizens in South Africa. culled from […]